Mari-nehupfumi, 24 Kurume 2019
Zviri Kutepfenyurwa Izvozvi Livetalk: Diaspora Forum
Svondo 24 Kurume 2019
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vanoti mauto achiri mubishi rekutsvaga mitumbi yevanhu vakashaya kunjodzi redutumupengo kana kuti Tropical Cyclone Idai kuManicaland.
Mumwe mutongi wedare muBulawayo arasa nyaya yange ichipomerwa mutori wenhau Zenzele Ndebele.
Kurume 21, 2019
Bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko raburitswa padandemutande raro reTwitter kuti vanhu zana nemakumi matatu nemapfumbamwe vafa kusvika parizvino nedambudziko retropical cyclone Idai.
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa voita musangano nevemasangano akazvimirira asi mumwe mutori wenhau achisungwa pamusangano wacho.
Kurume 20, 2019
Nyaya yedutumupengo Idai yapa kuti vamwe vanhu varasikirwe nehama dzavo dzakawanda zvikuru kuManicaland kunyanya
Dare Rinoti Mudzviti weMasvingo Haana Simba reKumisa Basa Sangano reCOTRAD
Dare repamusoro reHigh Court nhasi rasendeka parutivi kumiswa basa kwakaitwa sangano rinorwira kodzero dzevanhu muMasvingo reCommunity Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti COTRAD.
Misika yeFodya Yovhurwa Varimi Vachichema neMutengo
Misika yefodya yavhura nhasi mitengo iri pasi izvo zvisina kufadza varimi vakawanda avo vazivisa kuti vave kumbomira kutengesa fodya yavo kudzamara mitengo yasvika pari nani.
Pope Francis neVamwe Vatungamiri Vonyaradza Vakawirwa neDambudziko reDutumupengo Idai
Pope Francis vatumirawo mashoko enyaradzo kunyika nhatu dzakawirwa nedambudziko redutumupengo kana kuti tropical cyclone Idai iro rauraya vanhu vanogona kudarika chiuru chimwe chete muZimbabwe, Mozambiuque neMalawi.
Kurume 19, 2019
Sangano re European Union razivisa kuti richipa Zimbabwe mari inosvika 3.5 million Euros ichashandiswa mukubatsira avo vakatarisana nedutu mupengo re Tropical Cyclone Idai.
Gurukota rezvematunhu, VaJuly Moyo, vati rubatsiro kunzvimbo dzakarohwa nedutumupengo reCyclone Idai rwuri kunonoka kusvika nekuda kwekuti nzvimbo dzakanyanyokanganiswa nedutumupengo iri, hadzisi kusvikika.
Nhengo dzeparamende dzashora hurumende nekutadza kwayo kuyambira veruzhinji nguva ichiripo pamusoro pedutumupengo reCyclone Idai iro rakauraya vanhu makumi mapfumbamwe nevasere munyika.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dziri kuyambira kuti nemamiriro akaita zvinhu munyika Zimbabwe, ikasabatsirwa nenyika dzekunze uye masangano anopa rubatsiro, inogona kutatarika kugadzirisa zvivakwa zvakaparadzwa.